Sezihlehlisiwe izivivinyo e-CPUT | News24
Sezihlehlisiwe izivivinyo e-CPUT
Cape Town – Ukubhalwa kwezivivinyo enyuvesi iCape Peninsula University of Technology (CPUT) sekuhlehliswe ngesonto elilodwa njengoba kusaqhubeka izingxoxo phakathi kwabaphathi benyuvesi kanye nabafundi ababhikishayo.
Ngokomyalezo obubhekiswe kubafundi ngoMsombuluko, obambe njengeShansela kule nyuvesi, uDkt John Volmink, uxolisile “ngomthelela omubi” walokhu kuhlehliswa, wathi i-CPUT yenza konke okusemandleni ukuze ibuyise uzinzo ezikhungweni zayo.
Abaphathi benyuvesi, izishoshovu zeFeesMustFall, umkhandlu omele abafundi kanye nezinyunyana bakhiphe isitatimende ngokuhlanganyela nalapho bethe bonke bazobamba iqhaza ukuqinisekisa ukuthi akukho ukuphazamiseka ezindaweni okubhalelwa kuzo izivivinyo.
Kuphinde kwavunyelwana nangokuthi bonke onogada abazimele bazobe sebehoxisiwe ngoLwesibili.
NgeSonto, le nyuvesi ithole isivimbezelo senkantolo esiphuthumayo eNkantolo eNkulu yaseWestern Cape, nesivimbela abafundi ababhikishayo ukuthi bangaphazamisi okuqhubeka enyuvesi kanye nalokho okuhlangene nokubhalwa kwezivivinyo.
Ngenyanga eyedlule, le nyuvesi yagcina iphonse ithawula ekutheni kuqhubeke ukufunda nokufundisa kwabafundi abazifikela mathupha emagunjini okufunda, yathi “isifike lapho ingeke isakwazi ukuphinda emuva ukuze igweme unyaka wokufunda ka-2016”.